Kathmandu24 || 24*7 News In Nepali Language » विदेशबाट आउनेले सातदिन आफ्नै खर्चमा अनिवार्य होटल क्वारेन्टाइनमा बस्नैपर्ने
विदेशबाट आउनेले सातदिन आफ्नै खर्चमा अनिवार्य होटल क्वारेन्टाइनमा बस्नैपर्ने
काठमाडौ, भदौ ७ । विदेशमा रहेका नेपालीले पीसीआर परीक्षणसहित सात दिनसम्म क्वारेन्टिनमा बस्ने लिखित प्रतिवद्धता जनाएपछि मात्रै नेपाल आउन टिकट पाउने भएका छन् । विदेशबाट आउनेलाई अनिवार्य होटल क्वारेन्टिनमा बस्नैपर्ने व्यवस्था गरिएपछि होटल व्यवसायीहरुले पनि तयारी थालेका छन् ।
विदेशबाट आउने कुनैपनि व्यक्तिले पीसीआर परीक्षण गरेपछि मात्रै नेपाल आउनका लागि टिकट खरिद गर्न पाउनेछन । यस्तै नेपालमा आएपछि अनिवार्य सात दिन सम्म होटल क्वारेन्टिनमा बस्नुपर्ने र त्यसको खर्च आफैले तिर्ने लिखित प्रतिवद्धता समेत टिकट खरिद गर्दाको अवस्थामै जनाउनु पर्नेछ । त्यस्तै नेपाल आउनेले जहाजको टिकट खर्च विदेशमा नै तिर्नुपर्ने छ ।
उद्धार गरी ल्याइएका कतिपय नेपालीका लागि भने क्वारेन्टिन खर्च वैदेशिक रोजगार कोष र कोरोना उपचार तथा रोकथाम कोषबाट हुने छ । क्वारेन्टिनहरुको सुरक्षा नेपाली सेनाले गर्ने छ भने व्यवस्थापनको काम स्थानीय सरकारले गर्नेछ ।
सरकारले विदेशबाट हवाईमार्ग हुँदै नेपाल आउने नागरिकलाई अनिवार्य होटल क्वारेन्टाइनमा राख्ने व्यवस्था गरेपछि होटल व्यवसायीहरुले तयारी सुरु गरेका छन् । व्यक्ति होटलमा पुग्नासाथ सम्पूर्ण विवरण राख्ने र सम्पूर्ण रुपमा निर्मलीकरण गरेपछि मात्र कोठामा जाने व्यवस्था गरिने छ ।
सरकारले पीसीआर परीक्षण सहज भएका देशहरुबाट शर्त सहित नियमित उडान गर्ने निर्णय गरेको छ । दैनिक ५ सयभन्दा बढी यात्रु नकटने गरी उडान सञ्चालन गर्न दिने निर्णय सरकारले गरेको थियो । कतिपय विदेशमा रहेका नेपालीहरुले भने यो नियमको खुलेर विरोध गरेका छन । उनिहरुले पहिले जस्तै सरकारलेनै क्वारेन्टाइनको ब्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताएका छन् । ऊनीहरु भन्छन् -” हामी संग टिकट काट्ने पैसा छैन नेपालमा गएर तेति महङ्गो तिरेर होटलमा कसरी बस्नु ? हामी रोजगारी गुमाएर बसेका पिडात सङ पनि पैसा असुल्ने नीति कसरी लिन सकेको होला बुझ्नै सकेको छैन यता पिसिआर गर्न पनि खर्च लाग्छ अनि नेगेटिभ रिपोर्ट हुदा पनि क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने ? ”
होटल ब्यवसायी महासंघ भन्छ – भने अनुसार सेवा नदिए कारबाही गर्छौ
होटल व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष हिराध्वज शाहले होटल क्वारेन्टाइनमा बस्नेलाई सरकारले तोके अनुसारको सेवा सुविधा उपलब्ध नगराए कारबाही गरिने बताएका छन । महासंघले होटल क्वारेन्टाइनहरुको नियमित अनुगमन गर्ने र सरकारले तोकेको मापदण्ड अनुसार सुविधा नदिए सम्बन्धित होटललाई कारबाही गरिने उनले बताए ।
अनुगमनका लागि महासंघले कार्यकारी महासचिव शेरबहादुर थापाको संयोजकत्वमा ७ सदस्यीय समिति समेत गठन गरेको अध्यक्ष शाहले जानकारी दिए । समितिले दैनिक रुपमा होटल क्वारेन्टाइनको अनुगमन गर्ने र सरकारले भने अनुसारको खाना, खाजा लगायतको सेवा उपलब्ध नगराएको पाइए कारबाही गर्ने महासंघले जनाएको छ ।
प्रकाशित मिति August 23, 2020